Apple Watch 2016 ichave yemhando S ine yakafanana dhizaini | IPhone nhau
KGI: Iyo 2016 Apple Watch ichave iri "Model S"; kutengesa kuchadonha 25-30%
Runyerekupe rwazvino rwakareva kuti gore rino pachave ne Apple Watch neukobvu 40% zvishoma. Tariro ndicho chinhu chekupedzisira kurasika, asi sekutaura kweanobudirira kwazvo muongorori weApple, Ming Chi Kuo, smartwatch yeapuro iyo inosvika muna2016 ichave "S" yekuvandudza kune modhi yakapihwa muna 2014 pamwe neiyo iPhone 6 uye iPhone 6 Uyezve. A gadziridza "S" Inosanganisira kuvandudzwa kwemukati, izvo dzimwe nguva zvakakosha, asi kuchengetedza dhizaini yemhando yapfuura.
Kuo anoti avo vakamirira Apple kuti vatange mhando yakanaka ichafanira kumirira 2017. Muongorori anofunga kuti kambani inotungamirirwa naTim Cook inoshandisa zano rimwe chete rairi kushandisa pa iPhone, rinova dhizaini nyowani makore maviri ega ega. Icho chinhu chinonzwisisika pane iyo iPhone uye inoita kunge iine yakawanda mu "most personal device" pane block, nekuti varidzi veiyo yazvino modhi vachakwanisa kupfeka yakagadziridzwa dhizaini kwenguva yakareba.
Apple Watch kutengesa kuchaderera muna 2016
Kuo haana kuzofungidzira kufanotaura kuti ndeapi nhau aifungidzirwa kuti "Apple Watch-S", asi runyerekupe rwekare rwakavimbisa kuti iyo modhi nyowani yaizove neprosesa nyowani yaizovandudza mashandiro ewachi uye kamera iyo yaizobvumira vhidhiyo kufona yakananga kubva pachiuno.
Kuo akanyora zvakare nezve kutengesa kwemaapuro muna 2016, achivimbisa kuti chete mamirioni 7.5 emaApple Watches achatengeswa mugore rese rino nekuti musika wezvigadzirwa zvinopfeka uchiri mudiki. Muongorori anotenda kuti 10.6 mamirioni Apple Watches akatengeswa mu2015, saka tinenge tichitaura nezve a kuderera mukutengesa kweanosvika 30% in 2016.
Iyo Apple Watch-S yaizosvika riini? Kuo haanawo kutya kutaura kuti tichava neApple Watch itsva riinhi, asi runyerekupe rwazvino runoti ichaunzwa kuWWDC ichaitika imwe nguva muna Chikumi. Panguva ino, ikozvino yave nguva yangu yekuita semuongorori uye ndoti Apple Watch itsva ine dhizaini imwechete inogona kusvika gore rino, asi haizombonzi "Apple Watch S" kana chimwe chakadai. Ndinoona zviri nyore kwavari kuti vatange Apple Watch 2 iine zvidiki diki zvinoonekwa kupfuura Apple Tarisa S yakanangana nekuti zita rayo haritaridzike zvakanyanya pamberi pekutengesa. Uye hazviratidzike kwandiri kuti chiitiko chekuvandudza inguva yakanakisa yekuratidza chishandiso chitsva, asi yaisazove nguva yekutanga kuti vatore mukana nazvo. Chero zvazvingaitika, pane zvishoma zvasara kuti ndizive kana ini ndichigara chinzvimbo cheMing Chi Kuo seye akanakisa muongorori weApple (zvinova izvo kwete).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » KGI: Iyo 2016 Apple Watch ichave iri "Model S"; kutengesa kuchadonha 25-30%
Chero chero S ivo vachazvidya asi zvakanaka! Sei ini kubva kushamwari dzangu kana vemhuri kana vandaizivana navo vaine Watch asi kana iPhone .. Zvimwe zvakapfuura zvinodzikira zvakanyanya kana ini handimbove neWatch nekuti iko kushandiswa kushoma.
IOS 5 Nokusingaperi akadaro
Ita kuti iite dete ndapota !!
Pindura IOS 5 Nokusingaperi
Portland inoburitsa ruzivo rwekufambisa kwevanhu
Apple Inoti FBI Inogonawo Kuvhura Brooklyn iPhone